MOV iyo file MP4 qaabab labada bixiyaan awood u leh inay arkaan videos weyn, tayo sare leh, laakiin waxaa jira farqi weyn oo kaa dhigi kara mid ka mid ah qaab doorasho badan ka fiican mashruuca la siiyo. MOV iyo MP4 files Labada waxaa loo tixgeliyaa "Lossy", sababtoo ah macluumaadka aan ka isla markiiba la xiriira waxaa lagu tuuraa marka file la badbaadiyey in mid ka mid ah qaabab kuwaas. The "khasaaro" ma aha noticable oo u ogolaanaya size faylka si ka badan is qaabab u noqon.
MOV naqshadeeyay Apple, horyaal ee video shakhsiyeed, iyo sida oo kale waxaa weli Guuriyo u dhufto ee Apple, Mac iyo macruufka. Later, MP4 la Been abuurtay oo loo qaaday sida caadiga ah a, iyo halka ay ku salaysan tahay tabo cusub ee MOV, waa awood u hawlgala sidoo on madal kasta. Weelka in uu haystaa filim uusan saameyn ku yeelan video gudaha filimka, laakiin waxa aanu u fududayno computer ay ku ciyaaraan video ah marka ay ku caadiga ah, qaab MP4 aan Apple. Doorashada qaabka saxda ah si ay u isticmaalaan oo kaliya waa arrin barbar muuqaalada u dhexeeya labada nooc weelka.
Qeybta 1: MOV vs MP4, Faraqa u dhexeeya MOV iyo MP4
Qeybta 2: Sida loo Download iyo Play MP4 iyo MOV
Developer MP4, ama MPEG-4, waa ISO nooca file caadiga ah in sidoo kale mararka qaarkood Ioogu la .m4a kordhinta iyo .m4p. Qaab weel MP4 waa lossy, iyo sida inta badan ay dhigooda waxaa badanaa loo isticmaalaa geeyo ee files warbaahinta guud ahaan xiran Internetka. Iyada oo ku saleysan qaab file QuickTime Apple ee, MP4 waa heerka casriga ah ee multimedia, Tifaftirayaasha video. MOV, dhinaca kale, waa nooca file in la horumariyo oo laga sameeyey caanka by Apple Inc. Iyadoo qayb ka ah file QuickTime qaab maktabadda asalka ah in Apple diiwaan ah, MOV weli xambaarto Lebis Nooca aqoonsi com.apple.quicktime-movie. Weelka warbaahinta MOV ayaa ahaa kooxihii ay u, cross-madal nooca more hadda file MP4. MOV hadda inta badan loo isticmaalaa hababka Apple.
Taariikhda ISO ayaa aqoonsaday nooca file MP4 sida qayb ka mid ah nooca file .MOV Apple ee, taas oo ah lahaansho. MP4 ayaa ku riyaaqay kordhaya caan tan iyo markii ay soo dhaweynta ee 1999. MPEG-4 ama Guuritaanka Picture Expert Group-4 bilaabay sidii farac u Qaabka QuickTime File ah, iyo si ay u taageeraan doonaa Descriptors UJEEDDO horudhac ah oo ay la socdaan hawlaha kale ee MPEG. MP4 soo martay iterations badan tan iyo markii ay sii daayo hore u socdaa in la horumariyo maanta. Dhinaca kale, MOV hore u yimid - waxay ahayd weel asalka geeyo file video nooca, iyo maanta si wanaagsan u weli u adeegtaa si encapsulate lossy waxyaabaha video. Sida qaab file Apple lahaansho, horumarka ballaaran ee MOV ayaa inta badan ka dhacay domain dadweynaha, nooca file .MP4 ah.
Caanka Sida dheeraad ah oo casri ah oo cross-madal, qaab weel yoolka ah ee video MP4 jecel yahay, isticmaalka badan oo aqoonsi ka badan .MOV, QuickTime qaab file in Apple horumariyo ah. .MOV Weli waa in la isticmaalo, iyo QuickTime video files mararka qaar waxaa laga heli karaa internet-ka. Si kastaba ha ahaatee, sababta oo ah xiriirka lahaansho qaab .MOV ee Apple, waxa aan hormartay sida ugu dhakhsaha badan MP4 iyo hadda lama sida si fiican u yaqaan.
Durdurrada Data Noocyada weel MP4 yihiin in ay qabtaan MPEG 4-bandhigyo, kuwaas oo la index wada rujin loo yaqaan BIF MPEG-4 ah awoodaan. The Muuqaallo kala duwan ee MP4 waa in ay qabtaan music, video ama text content dhabta ah ee soo bandhigidda awoodaan. Nooca weel file MOV ka dhigaysa isticmaalka nidaamka 'track' in dad ku jira. Kuwan raadkaygay kala duwan oo badan ka dhigi doonaa ilaa video ah qaab file .MOV weelka. Kuwan raadkaygay ayaa si madax-bannaan ku jiri kara qoraalka, ama video, ama dhawaaq.
Metadata Files .MP4 ay awoodaan in ay ka qaybgalaan macluumaadka laga sii wanaajiyo dheeraad ah weelal ay. Xogtan noqon karaa mid fudud sida horyaalka ah, ama sida adag sida xog ah ee video ah. Metadata Tani waa fududahay in encapsulate in MP4 ah. Qaab filim QuickTime waa ay awoodaan in ay ku jiraan metadata, laakiin waxa ay noqon kartaa wax adag in ay xaalkaa la software caadiga ah. By tags iyo qoritaan isticmaalaya, marka lagu daro Album caadiga ah, Artist, iwm in loo isticmaalo Lugood, waxay ka caawisaa dadka isticmaala abaabulo oo loo maareeyo warbaahinta ay.
Faa'iido 1. MP4 waa mid ka mid ah qaabab file ugu universal iyo heerarka u jirta maanta.
2. Waxaa loo isticmaalaa ku saabsan dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka, nidaamyada hawlgalka iyo dadka isticmaala noocyo badan oo kala duwan. 1. Mid ka mid ah heerarka file ugu da'da weyn ee isticmaalka maanta.
2. MOV waa fududahay in la isticmaalo, ay fududahay in la dar metadata, oo waxaa muuqan oo ay dad badan ku dhufto ee Apple loo isticmaalo.
Qasaarooyinka 1. MP4, halka qaab lossy, ma aha heer sare Tifaftirayaasha.
2. Faylal ay noqon kartaa mid ka badan ee ah qaabab kale. Qaab A lahaansho, MOV u baahan kartaa software dheeraad ah oo loo yaqaan codec ah in ay turjumaan marka aan isticmaalo qalabka Apple ah.
U isticmaala in ay Qalabka sida gaari, telefoonada, qalabka Android, qalabka Windows, qalabka Linux, ciyaartoyda MP4, ciyaartoyda DVD Aaladaha Apple
Related links 1. MPEG-4 Qaybta 14
2. Ka guuritaanka Picture Khubarada Group
3. Archos Jukebox 6000 1. Waa Maxay Qaabka MOV?
2. MOV, wmv, AVI, MPEG, MP3, OGG, WMA, ... Media qaabab Explained
Qeybta 2: Sida loo Download iyo Play MP4 iyo MOV?
MP4 iyo MOV jira laba qaabab badanaa loo isticmaalaa video files hadhay oo la mid ah oo kala duwan. Labada qaabab file kuwani waa diyaar ahaadaan si loogu free internet ka download, laakiin waxaad u baahan tahay nooc ka mid ah xirmada software dibadda si ay u soo bixi. Sidaas darteed haddii aad ku heynaa inaan u xirmo la mid ah software kaa caawin karaa in dhacdadaas oo kale, ka dibna Wondershare AllMyTube waa xalka ugu fiican ee aad u!
Sida loo soo bixi MP4 iyo MOV isticmaalaya Wondershare AllMyTube?
Haddii aad indhaha ku heynaa in degsado MP4 iyo MOV video files isticmaalaya Wondershare AllMyTube, markaas fadlan raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Tallaabada 2 Raadi aad file MP4 ama MOV inaad kala soo baxdo
Kadib markii ay Wondershare AllMyTube xirmo software-ka, tallaabada xigta waa in la bilaabo raadinaya file MP4 ama MOV in aad rabto in aad kala soo bixi ka. Waxaad isticmaali kartaa browser kasta oo internet ah ee raadinaya jecel videos aad. Waxaa jira dhowr websites sida YouTube, Dailymotion iwm ka halkaas oo aad ka heli kartaa ugu fiican MP4 tayada iyo MOV files.
Marka aad dhamaysato habka download, file ka soo dejisan waxaa laga heli karaa "uga dhammaatay" qaybta ka meesha aad u bedeli karaan video uu ku noqon karo qaab kale oo ka duwan aad rabto. Tusaale ahaan, waxaad kala soo bixi video MP4 ah oo aad dooran kartaa in aad loogu badalo video MP4 in la MOV adigoo riixaya "Beddelaan" button, ka dibna waxay doortaa qaab ah in ay "MOV".
Talaabada 5 Play faylka MOV bixi
> Resource > MP4 > MOV vs MP4, Faraqa u dhexeeya MOV iyo MP4